Samsung Galaxy S9 bụzi gọọmentị, nkọwa niile na atụmatụ nke ọhụụ Samsung ọhụrụ | Gam akporosis
Ụlọ Ignatius | | Ngwa gam akporo, MWC, Samsung
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ nke asịrị, anyị mechara nwee ike iwepụ obi abụọ ma lelee asịrị ndị emesiri gosipụta na nke bụ nsonaazụ nke iwe nke ụfọdụ ndị nwere oke ọchịchọ maka ịbụ onye ama ama. O meela minit ole na ole kemgbe ihe ngosi ahụ mechara Anyị nwere ike ịchọpụta nkọwa niile nke ọhụụ Samsung ọhụrụ.
Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ndị na-adọta uche kachasị, anyị na-ahụ ya na igwefoto S9, igwefoto n'agbanyeghị agbanyeghị otu lens, na-enye anyị ihe karịrị atụmatụ dị egwu, atụmatụ ndị na-enye anyị ohere ijide oge n'ụzọ dị mfe. ekele ntụgharị ntụgharị f / 1,5-f / 2.4, teknụzụ m na-amaghị. Ahụtụbeghị m na ọdụ ọ bụla ọzọ.
1 Samsung Galaxy S9 igwefoto
3 N'ime Samsung Galaxy S9 na S9 +
4 Samsung Galaxy S9 na S9 + ihuenyo
5 Samsung Galaxy S9 nkọwa
6 Samsung Galaxy S9 + nkọwa
7 Nche na Samsung Galaxy S9 na Galaxy S9 +
8 Samsung Galaxy S9 ego na tọhapụ ụbọchị
9 Samsung Galaxy S9 + price na tọhapụ ụbọchị
Samsung Galaxy S9 igwefoto
Ọfọn, ọ bụrụ na anyị echebara ụdị ọdụ shea ụlọ ọrụ Korea ahụ wepụtara n'afọ gara aga na mba ya, ọdụdụ nke na-enye anyị usoro mmeghe nke anyị nwere ike ijide oge ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụhaala na anyị maara etu iji nweta ya. ọtụtụ uru, ihe dị nnọọ mfe ekele na akpaka mode.
Obere oghere, f / 1,5, na-enye anyị ohere ijide obere oge na obere ọkụ na ekele maka sistemụ mkpọtụ mkpọtụ akpaka nke Samsung, nsonaazụ ndị a na-enye dị oke egwu, na enweghị nnwale anụ ahụ na-eme nyocha iji mezuo ma kwenye ike nke igwefoto shutter ọhụrụ a na-enye.
Igwefoto n'ihu nke Galaxy S9 bụ otu ihe anyị nwere ike ịchọta na onye bu ya ụzọ, mana yana ihe mmetụta ọhụụ nke na - eme kawanye mma nwude. Igwefoto a na-enye anyị mkpebi nke 8 mpx, oghere nke f / 1,7 na autofocus.
Ihe dị iche iche nke Galaxy S9 + na-enye anyị maka onye bu ya ụzọ, anyị na-ahụ ya na igwefoto abụọ, igwefoto abụọ na-enye anyị nsonaazụ yiri nke anyị nwere ike ịchọta ugbu a na Galaxy Note 8, nke mbụ njedebe nke ụlọ ọrụ nwere sel ụlọ okpukpu abụọ. Dị ka Galaxy S9, n'azụ anyị na-ahụ oghere 12 mpx nwere oghere ntụgharị site na f / 1,5 ruo f / 2.4 na oghere sara mbara-oghere nwere oghere f / 2,4.
Banyere igwefoto dị n'ihu, ndị Korea ọzọ nke Samsung ahọrọla imejuputa a 8 mpx n'ihu igwefoto na oghere f / 1,7 na autofocus, ọ bụ ezie na n’adịghị ka ihe anyị nwere ike ịchọta na Galaxy S8 na S8 + ihe mmetụta ahụ ka mma.
N'ime Samsung Galaxy S9 na S9 +
Ihe omuma ohuru nke nke iteghete nke Galaxy S9, anyi huru ya na ego RAM di na uzo abuo. Nke ukwuu Galaxy S9 dị ka Galaxy S9 na-enye anyị 6 GB nke RAM, Ihe karịrị RAM zuru ezu ka oghere nke ngwa dị na ebe nchekwa dị ngwa ngwa na mgbakwunye na ịnye nnukwu mmiri na sistemụ dum.
Banyere onye nhazi ahụ, anyị ahụghị ozi ọ bụla, ebe ọ bụ na ụdị ọhụrụ a ga-adị na nsụgharị abụọ, maka ahịa dị iche iche. N'otu aka anyị na-ahụ Qualcomm Snapdragon 845 maka United States, Latin America na China, mgbe Exynos 9810 ga-abụ ihe nhazi nke ga-ejikwa Galaxy S9 na Galaxy S9 + niile na-abata na Europe dị ka mba ndị ọzọ.
Samsung Galaxy S9 na S9 + ihuenyo
Samsung na-agbaso usoro a site na afọ gara aga, na-anabata ihuenyo 5,8 nke anụ ọhịa ahụ maka Galaxy S9 na ihuenyo 6,2 nke Galaxy S9 +. Ọzọ ọ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ihuenyo enweghị ngwụcha, okwu nke ụlọ ọrụ rụpụtara na mwepụta nke Galaxy S8 na S8 +. Ebumnuche abụọ ahụ na-enye anyị akụkụ 18.5: 9, na-enweghị ịkụ nzọ n'oge ọ bụla na ọkwa nke mere iPhone X fashionable, nakwa na ọtụtụ ndị na-emepụta amalitela ịkwado.
Ọzọ Galaxy S9 na S9 + jiri ụdị ụdị SuperAMOLED nwere a mkpebi na ngwaọrụ abụọ 2.960 x 1.440 pikselụ, na otu ihuenyo ruru na aghọwo ihe kasị eji niile ọnụ na ruru ahịa ihe karịrị afọ gara aga kemgbe Samsung ga-ewetara S8 na S8 +.
Samsung Galaxy S9 nkọwa
Nka na ụzụ nkọwa Samsung Galaxy S9
Nlereanya Galaxy S9
Usoro njikwa Android Oreo 8.0
Ihuenyo 5.8 sentimita - 2.960 x 1.440 dpi
Nhazi Exynos 9810 / Snapdragon 845
Nchekwa n'ime 64. 128 na 256 GB gbasaa site na kaadị microSD
Igwefoto na-aga n'ihu 12 mpx nwere oghere ntụgharị f / 1.5 ka f / 2.4. Ngwa ngwa mmegharị vidiyo 960 fps
Igwe n'ihu 8 mpx f / 1.7 nwere autofocus
Njikọ Bluetooth 5.0 - NFC mgbawa
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka mmetụta - Face Kpọghe - Iris nyocha
Akụkụ X x 147.7 68.7 8.5 mm
Ibu ibu 1634 grams
Samsung Galaxy S9 + nkọwa
Nka na ụzụ nkọwa Samsung Galaxy S9 +
Nlereanya Galaxy S9 +
Usoro njikwa gam akporo 8.0
Ihuenyo 6.2 sentimita - 2.960 x 1.440 dpi
Nchekwa n'ime 64 128 na 256 GB gbasaa site na kaadị microSD
Igwefoto na-aga n'ihu Igwefoto 2 nke 12 mpx. onye nwere oghere ngbanwe f / 1.5 - f / 2.4 na uzo abuo f / 2.4. Super ngwa ngwa ngagharị 960 fps
Akụkụ X x 158 73.8 8.5 mm
Nche na Samsung Galaxy S9 na Galaxy S9 +
Dị ka ọtụtụ ọnụ ahịa ndị ruru ahịa na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị mgbe ngosi nke iPhone X, ọhụụ ọhụrụ Galaxy S9 na S9 + na-enyekwa anyị ọdịdị ihu usoro, na mgbakwunye na ihe mgbaàmà mkpịsị aka omenala na onye na-agụ iris. O doro anya na Samsung lekwasịrị anya n'inye usoro nchebe nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ ya bụrụ onye nzuzu.
Samsung Galaxy S9 ego na tọhapụ ụbọchị
Ọtụtụ abụwo asịrị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, bụ nke e kwuru na ọkọlọtọ Samsung ọhụrụ nwere ike ị gafere euro 1000, n'ụdị nwere obere ikike. Dịka anyị gwara gị ụbọchị ole na ole gara aga, ọnụahịa nke Samsung Galaxy S9 na-amalite na euro 849.
Ihe nlereanya a ị nwere ike ịgba akwụkwọ ugbu a Na March 8, ndị ọrụ debere ya ga-amalite ịnata ya, mana ọ gaghị anọ rue Machị 16, mgbe ọnụahịa a ruru ahịa.
Samsung Galaxy S9 + price na tọhapụ ụbọchị
N'afọ gara aga, ọdịiche dị n'etiti Galaxy S8 na S8 + bụ euro 100. N'afọ a, ọdịiche dị n'otu, yabụ Galaxy S9 + ga-ada ahịa maka euro 949, Euro 100 karịa nwanne ya nwoke nke nta.
Dị ka nwanne ya nwoke, ihe nlereanya a Nwere ike ịde akwụkwọ ozugbo site na weebụsaịtị Samsung, ma ọ gaghị anọ ruo mgbe March 8 na-esote mgbe ndị ọrụ mbụ mere ndoputa bidoro ịnata ya. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị idobe ya, ị ga-echere ruo mgbe Machị 16, ụbọchị Samsung họpụtara maka mmalite ahịa nke ọnụahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Samsung Galaxy S9 bụzi gọọmentị, nkọwa niile na atụmatụ nke ọhụụ Samsung ọhụrụ